Etu esi kpochapu Button Butter Butter - Were ndụmọdụ ndị a | Bezzia
Susana godoy | 09/06/2021 12:00 | Mma
You ma ka esi akụzị otubo ahụ ịkpọpu akụkụ? N'ihi na ọ bụ otu nnukwu obi abụọ na-awakpo anyị mgbe anyị mere oghere n'ime ahụ na karịa, na otu dị ka otubo, na unyi zuru ezu na-agbakọta ọbụlagodi na anyị achọghị. Yabụ, taa ị ga - ewepu obi abụọ a niile.
Iji gosipụta ya, anyị ga-agbaso usoro ndụmọdụ. Ha niile ga - egbochi ọrịa ahụ ịgbasa ma nye anyị ohere igosipụta ọla anyị ngwa ngwa o kwere mee. Ee n'ezie, gbalịakwa soro ntuziaka ndị ọkachamara nyere na m mere gị ya n'ihi na ugbu a, anyị na-amalite na nke anyị.
1 Kedu ihe m ga - eme iji kpopu ahihia
2 Esi gwọọ otubo ịkpọpu akụkụ
3 Etu esi amata ma otubo a kpopuru bu oria
Kedu ihe m ga - eme iji kpopu ahihia
Anyị emeworị elu na otubebe ịkpọpu akụkụ nwere ike isi ike karịa ijide ọrịa. Karịa ihe ọ bụla n’ihi na ọ bụ ebe unyi na-agbakọta n’otu ntabi anya. Ya mere, anyị kwesịrị ilebara ya anya nke ọma na anyị ga-emeghachi usoro ahụ ugboro abụọ kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị ga-emetụ ọnya ahụ, anyị ga-eji ncha na mmiri sachaa nke ọma. Ma nke a nke na-enweghị ihe na-esi ísì ụtọ kama ọ ka mma ịhọrọ nke na-anọpụ iche.
Maka mpaghara dị na ya, ọ dịkwa mkpa were obere mmiri na ncha dị ncha sachaa ya. Agbanyeghi na egosiputara saline physiological. Anyị ga-agba ya na ya, na-achọpụta na ọ na-agbanye oghere ahụ nke ọma.
A bịa n'ihicha ya, Nwere ike ịmegharị ịkpọpu akụkụ ma jiri nnukwu nlekọta na naanị ibuli ma ọ bụ iwetu ya, ya mere enweghị mpekere n'etiti. Firstbọchị mbụ anyị ga-achọpụtarịrịrịrị ya n'ihi na ọ bụ mgbe ahụ ka anyị ga-achọ ya.
Ozugbo anyị dị ọcha, anyị kwesịrị ịmịcha ebe ahụ ma anyị agaghị eji akwa nhicha ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya. Ma ka mma gauze na inye obere aka dị nro, na-ezere ịdọrọ, n'ihi na ọ nwere ike inye anyị nsogbu.
Esi gwọọ otubo ịkpọpu akụkụ
Na mgbakwunye na usoro ndị anyị kwurula, enwere ihe ọzọ anyị ga-echetarịrị n'ihi na ọ dịkwa mkpa. Yabụ, ọ bụrụ n ’ị na-eche etu ị ga-esi gwọọ otube ahụ, mgbe ahụ i kwesịrị ịma ihe ndị a niile:
Mgbe ịsachara ma hichaa ya, ọ dịkwa mma itinye ọgwụ disinfectant, iji gbochie ọrịa nwere ike ịda. Ma mgbe ị na-a alcoholụ mmanya na ọnya ahụ.
Jiri mkpara sitere na nti ya na mmiri ọkụ. ị nwere ike dị nro na scabs na-egosi mgbe ụfọdụ. Kama ịdọrọ ha ma mee ka anyị bụrụ ọnya ka ukwuu, ọ ka mma ịgbaso usoro a iji wepu ha ngwa ngwa.
Wepụ ihe ịkpọpu akụkụ. Ga-ebugharị ya dịka anyị gosipụtara, mana na-ahapụ ya ebe ọ bụla belụsọ ma dọkịta agwa gị ihe ọzọ.
Anyị na-ekwu maka ọnya nke na-ewekarị oge iji gwọọ. Yabụ ịkwesịrị ichere izu abụọ ma ọ bụ atọ tupu ị gaa ọdọ mmiri ma ọ bụrụ na ị gaa, ọ kachasị mma ikpuchi ya dị ka o kwere mee, debe ya ka o kwe omume site na chlorine.
Ejila akwa uwe siri ike na mpaghara a., nke nwere ike imegide ọla ahụ ma ọ bụ na ọ nwere ike nwude ya. N'ihi na jerks adịghị mma n'oge usoro ọgwụgwọ.
Etu esi amata ma otubo a kpopuru bu oria
Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị mmadụ niile ga-enweta otu mmeghachi omume. Mana ee, mgbe anyị na-ekwu maka ibute ọrịa n'ime ịkpọpu akụkụ, anyị na-ama doro anya na enwere ọtụtụ ihe mgbaàmà ndị anyị na-ekwesịghị ileghara anya.
Ihu afọ ga-acha uhie uhie karịa ka ọ dị na mbụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ụbọchị mbụ ọ nwere ike ịbụ na enweghị ọrịa.
Ga-ahụkwu ọkụ na mpaghara ahụ na ị ga-ahụ ụfọdụ mbufụt.
Ọzọkwa, mgbe ị metụrụ ya aka, ọ ga-afụ ụfụ ma jiri ya ebido ime ka ngosipụta.
N'ọnọdụ ndị dị oke njọ, ọ nwere ike inye obere ahụ ọkụ, mana ọ bụghị ihe a na-ahụkarị. Ọ bụrụ otú ahụ, ị ​​ga-akpọtụrụ dọkịta gị.
N'oge niile ị ga-enwerịrị obere ndidi, n'ihi na ọ bụ ọnya na ọ nwere ike were ọtụtụ izu ma ọ bụ ọnwa iji gwọọ kpamkpam. Ugbu a, ị marala esi kpochapụ otube ahụ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Etu esi kpopu ahihia otubo